Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Macau GT Cup nke Sands China na-akwado
Sands China Ltd. bụ onye nkwado nke iko Sands China Macau GT nke izu ụka a, bụ nke nabatara ndị ọkwọ ụgbọ ala si gburugburu ụwa ịsọ mpi n'egwuregwu asọmpi mbinye aka obodo, Macau Grand Prix.
Sands China nkwado n'ọsọ bụ akụkụ nke nkwado ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na mmepe egwuregwu na njem nlegharị anya egwuregwu na Macao, iji kwalite atụmatụ njem nlegharị anya nke gọọmentị Macao. Ọ bụkwa nkwado maka nraranye gọọmentị na ijide 68th Macau Grand Prix n'agbanyeghị ihe ịma aka na-aga n'ihu nke ọrịa na-efe efe, na mbọ iji tinye ike dị mma n'ime ọha mmadụ site na ihe omume obodo niile.
Ndị isi njikwa Sands China Ltd. na ndị otu egwuregwu bụ onye isi oche ụlọ ọrụ Dr. Wilfred Wong duuru ka ha hụ anya ụgbọ ala ndị ejiri akara Sands China na mmalite grid wee gaa emume ngosi ihe nrite mgbe agbụrụ ahụ gasịrị na Sọnde.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala na-anọchite anya Macao, Hong Kong, na mpaghara ala gbara ọsọ na Sands China Macau GT Cup, na-agba ọsọ n'ụgbọ ala agbụrụ kacha elu sitere na Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, na BMW.
Sands China nwere olile anya na agbụrụ a nwere ike ịbụ ụzọ isi kwado ndị na-anụ ọkụ n'obi egwuregwu mpaghara yana ịkwalite ohere mgbanwe iji nyere aka kwalite asọmpi mba ụwa.
Sands China Ltd nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ịkwado mmepe nke mmemme egwuregwu na Macao. Ụlọ ọrụ ahụ akwadola, kwado ma ọ bụ hazie ọtụtụ mmemme egwuregwu kemgbe ọtụtụ afọ, gụnyere na basketball, football, golf, ịkụ ọkpọ, ịgba ọsọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Sands China na-ejikarị ohere asọmpi ndị a na egwuregwu ngosi ewepụtara iji kwado mmemme inyeaka dị ka ụlọọgwụ ndị ntorobịa na mmemme lekwasịrị anya n'obodo iji soro obodo na-aga n'ihu na iji bulie mmetụta dị mma nke ihe omume n'obodo ahụ. Ụlọ ọrụ ahụ akwụsịbeghị na nkwado ya nke mmemme egwuregwu na Macao, n'agbanyeghị ihe isi ike nke gburugburu ebe ọrịa na-efe efe wetara.